ပိုက်ဆံက ဒီလိုစကားတွေ သင့်ကိုနေ့ တိုင်းပြောပြနေပါတယ် – Blue Sea
ပိုက်ဆံက ဒီလိုစကားတွေ သင့်ကိုနေ့ တိုင်းပြောပြနေပါတယ်
blueseaskt | August 16, 2019 | Knowledge | No Comments
၁။ ပိုက်ဆံ ရှာရာတွင်ဘယ်တော့မှတစ်ခုတည်းသောဝင်ငွေအပ်ါမှာမရပ်တည်ပါနဲ့။
တခြားသော ဒုတိယဝင်ငွေဝင်နိုင်အောင် ရင်းနှီးထားပါ။
လူတစ်ယောက်က ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုခြေစုံပစ်ရပ်တည်နေရင် အဲ့ဒီဝင်ငွေရပ်တန့်သွားတဲ့နေ့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ရတက်ပါတယ်။ ဘဝမှာလည်း အားလုံး ဗြောင်းဆန်သွားတက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒုတိယ ဝင်ငွေ ရနိူင်မယ့် နည်းလမ်းကို
၂။ ပိုက်ဆံ သုံးရာတွင် သင့်မှာမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပါများနေရင် သင့်မှာအမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို စွန့်လွှတ်ရတက်ပါတယ်။မလိုတာတွေ
ဝယ်မိနေတဲ့အတွက် တကယ်လိုတဲ့အခါ သုံးစရာမရှိ ဖြစ်တက်ပါတယ်။
၃။ ပိုက်ဆံ စုရာတွင်သုံးပြီးလို့ ပိုတာကို မစုပါနဲ့။ စုပြီးလို့ ပိုတာကို သုံးပါ။ သုံးပြီးလို့ ပိုမှစုမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီတသက်သင့်စုဖြစ်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံဝင် လာရင် အရင်ဆုံးသင်စဉ်းစားရမှာက ဘယ်လောက်စုမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးမှ ပိုတာကို သုံးပါ။စုတယ်ဆိုတာကလည်း တသက်လုံး စုဗူးထဲမှာ အဲ့ဒီပိုက်ဆံကို
ထားဖို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ဘဝအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာအသုံးချဖို့အတွက်ပါ။သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးမြှင့်ဖို့၊သင့်ရဲ့အရည်အချင်းတွေမြှင့်တင်ရပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ သင်တန်းတွေ တက်ရပါမည်။
အဲ့ဒီအတွက် သင့်မှာ ပိုက်ဆံတွေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ စွန့်စား ရာတွင်ရေ အတိမ်အနက်ကို ခြေနှစ်ချောင်းလုံးချ မစမ်းလိုက်ပါနဲ့။ မစွန့်စားနဲ့လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ မစွန့်စားပဲနဲ့လည်း ဘယ်အလုပ်မှမအောင်မြင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စွန့်စားရာမှာတော့အလွန်ပါးနပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အလုပ်မျိုးကို ရှိသမျှ ပိုက်ဆံတွေ ပုံအောလိုက်တာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့။
၅။ ရင်းနှီး မြုပ်နှံရာတွင် အရင်းနှီးတစ်ခု စတင်မယ်ဆိုရင်လည်း ရှိသမျှ ပိုက်ဆံတွေ အားလုံးကို တနေရာထဲမှာ
ရူံးလည်း ရူံးနိူင်ပါတယ်။ ရှိသမျှငွေအားလုံးကို တနေရာတည်းမှာ စုပြုံရင်းနှီးထားရင် မတော်လို့ ရူံးရတဲ့အခါ တစ်ပြားမှ အကျန်အောင်ထိဖြစ်သွားတက်ပါတယ်။
၆။ မျော်လင့် ရာတွင် ရိုးသားခြင်းဆိုတာ ရှားပါးဈေးကြီးတဲ့ လက်ဆောင်မွန်ပါ။ဒါကြောင့် ခပ်ပေါပေါ
လူတွေဆီက သင်မမျော်လင့်ပါနဲ့။ သင် ရိုးသားသလို လူတိုင်းရိုးသားမယ်လို့ အသေအချာ အပိုင်မတွက်ထားပါနဲ့။ ရိုးသားမှုဆိုတာ ဒီခေတ်ကြီးမှာအတော်ကိုရှားပါးတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ရူးရူးမိုက်မိုက်နဲ့ ဒီတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းကိုလူတိုင်းဆီကသင်မမျော်လင့်မိပါစေနဲ့။
ကိုယ်စီ ပိုင်ဆိုင်နိူင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း…………
Gumhpraw A Lam
၁။ ပိုကျဆံ ရှာရာတှငျဘယျတော့မှတဈခုတညျးသောဝငျငှအေပျါမှာမရပျတညျပါနဲ့။
တခွားသော ဒုတိယဝငျငှဝေငျနိုငျအောငျ ရငျးနှီးထားပါ။
လူတဈယောကျက ဝငျငှတေဈခုတညျးကိုခွစေုံပဈရပျတညျနရေငျ အဲ့ဒီဝငျငှရေပျတနျ့သှားတဲ့နေ့ ခွမေကိုငျမိ လကျမကိုငျမိ ဖွဈရတကျပါတယျ။ ဘဝမှာလညျး အားလုံး ဗွောငျးဆနျသှားတကျပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ဒုတိယ ဝငျငှေ ရနိူငျမယျ့ နညျးလမျးကို
၂။ ပိုကျဆံ သုံးရာတှငျ သငျ့မှာမလိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှဝေယျပါမြားနရေငျ သငျ့မှာအမှနျတကယျ လိုအပျတဲ့ပစ်စညျးတှကေို စှနျ့လှတျရတကျပါတယျ။မလိုတာတှေ
ဝယျမိနတေဲ့အတှကျ တကယျလိုတဲ့အခါ သုံးစရာမရှိ ဖွဈတကျပါတယျ။
၃။ ပိုကျဆံ စုရာတှငျသုံးပွီးလို့ ပိုတာကို မစုပါနဲ့။ စုပွီးလို့ ပိုတာကို သုံးပါ။ သုံးပွီးလို့ ပိုမှစုမယျဆိုရငျတော့
ဒီတသကျသငျ့စုဖွဈမယျလို့ မထငျပါဘူး။ ပိုကျဆံဝငျ လာရငျ အရငျဆုံးသငျစဉျးစားရမှာက ဘယျလောကျစုမလဲ ဆိုတာပါပဲ။ ပွီးမှ ပိုတာကို သုံးပါ။စုတယျဆိုတာကလညျး တသကျလုံး စုဗူးထဲမှာ အဲ့ဒီပိုကျဆံကို
ထားဖို့ ပွောတာ မဟုတျပါဘူး။ သငျ့ဘဝအတှကျ လိုအပျတဲ့နရောတဈခုမှာအသုံးခဖြို့အတှကျပါ။သငျ့ရဲ့ တနျဖိုးမွှငျ့ဖို့၊သငျ့ရဲ့အရညျအခငျြးတှမွှေငျ့တငျရပါလိမျ့မယျ။
အဲ့ဒီလိုလုပျဖို့ သငျတနျးတှေ တကျရပါမညျ။
အဲ့ဒီအတှကျ သငျ့မှာ ပိုကျဆံတှလေိုအပျပါလိမျ့မယျ။
၄။ စှနျ့စား ရာတှငျရေ အတိမျအနကျကို ခွနှေဈခြောငျးလုံးခြ မစမျးလိုကျပါနဲ့။ မစှနျ့စားနဲ့လို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး။ မစှနျ့စားပဲနဲ့လညျး ဘယျအလုပျမှမအောငျမွငျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ စှနျ့စားရာမှာတော့အလှနျပါးနပျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အန်တရာယျရှိတဲ့ အလုပျမြိုးကို ရှိသမြှ ပိုကျဆံတှေ ပုံအောလိုကျတာမြိုး မလုပျမိပါစနေဲ့။
၅။ ရငျးနှီး မွုပျနှံရာတှငျ အရငျးနှီးတဈခု စတငျမယျဆိုရငျလညျး ရှိသမြှ ပိုကျဆံတှေ အားလုံးကို တနရောထဲမှာ
ရူံးလညျး ရူံးနိူငျပါတယျ။ ရှိသမြှငှအေားလုံးကို တနရောတညျးမှာ စုပွုံရငျးနှီးထားရငျ မတျောလို့ ရူံးရတဲ့အခါ တဈပွားမှ အကနျြအောငျထိဖွဈသှားတကျပါတယျ။
၆။ မြျောလငျ့ ရာတှငျ ရိုးသားခွငျးဆိုတာ ရှားပါးဈေးကွီးတဲ့ လကျဆောငျမှနျပါ။ဒါကွောငျ့ ခပျပေါပေါ
လူတှဆေီက သငျမမြျောလငျ့ပါနဲ့။ သငျ ရိုးသားသလို လူတိုငျးရိုးသားမယျလို့ အသအေခြာ အပိုငျမတှကျထားပါနဲ့။ ရိုးသားမှုဆိုတာ ဒီခတျေကွီးမှာအတျောကိုရှားပါးတဲ့အရာတဈခုပါ။ ဒါကွောငျ့ ရူးရူးမိုကျမိုကျနဲ့ ဒီတနျဖိုးကွီးပစ်စညျးကိုလူတိုငျးဆီကသငျမမြျောလငျ့မိပါစနေဲ့။
ကိုယျစီ ပိုငျဆိုငျနိူငျကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုရငျး…………
1. Money is never the only income I have to stand.
Keep close to the other second income.
When someone standing forasingle income revenue to simply stop intoahold up. All life is topsy-turvy. So that will be able to earn second method
2. Use your money to buy unnecessary products high can you truly abandoned equipment up there.
When to buy, so If you’re of no use.
3. Using the most money. Use more after. If using more
These do not think I’m not sure if this is your life. How much money, if you need to consider first is what. And then use more money on me. When I care .Here
You do not. Your life should be required to use the area., To raise the value of your skills will have to promote.
Such classes must begin.
Will you read good literature.
Causing’ll need your money.
You can spend your money.
4. Adventures in the depth of the water test and both legs. I would not be adventurous. I also work at the risk of failure. But the adventurer, the need to be very clever. All kind of dangerous work to make money to repeat when.
5. The investments in anywhere close all starts, all your money
Accumulate close as it can be so precious.
ရူံး ရူံး interface. Unless you accumulate all the money all at the same location close to Toulouse ရူံး up and becomesapenny left.
6. Moscow forward, honesty isarare gift expensive. So ခပျပေါပေါ
People with you, and looks forward to. You certainly honest, everyone would be honest and do not possess. Honesty is something rare in this age. So recklessly and that this valuable material from everyone looks forward to.
A successful golden future
Can be owned by the ကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုရငျး …………
ချစ်သူကို အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့သူတွေ လုပ်မိတတ်တဲ့ အရာ (၄) မျိုး
အသား အ ရေ အလှအပ အတွက် အာလူးကို အသုံးပြု နိုင် မယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၇) မျိုး
ဂုတ်ထိပ်တံတား သမိုင်း….. ________________________